အပြိုဘဝကတညျးက ထိနျးသိမျးလာ တဲ့ ဆံပငျရှညျလေးကို သားသားလေး မှေးပွီးသညျ့တိုငျ အမွတျတနိုးထားရှိ နေ ဆဲဖွဈတဲ့ ပနျးအိဖွူ – XB Media Myanmar
ပရိသတျကွီးရေ မွနျမာသံစဥျတေးသီခငျြးတှနေဲ့ ဂီတလောကမှာ အောငျမွငျမှုတှရေရှိနတေဲ့ တေး သံရှငျကတော့ အဆိုတျော ပနျးအိဖွူ ပဲဖွဈပါတယျ။ ယနအေ့ခြိနျထိလညျး ပနျးအိဖွူ က အနုပညာအလုပျတှကေို အနညျးငယျမြှသာ လုပျကိုငျနပွေီး သာယာပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ အိမျ ထောငျရေးကို တညျဆောကျထားတာဖွဈပါတယျ။ သူမက မွနျမာဆနျဆနျ ဝတျစုံလေးတှေ ကိုပဲ ဝတျဆငျတတျပွီး ဆံနှယျရှညျလေးတှနေဲ့ နနျးဆနျတဲ့ သူပဲဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ ပနျးအိဖွူဟာ သာယာပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ အိမျထောငျရေးလေးကို ပိုငျဆိုငျ ထား ပွီး ခဈြစရာ သားလေးတဈယောကျကို မှေးထားခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ပရိသတျတှကေ သူမ သားလေးကို ခဈြအားပိုအောငျလညျး သားလေးရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပနျးအိဖွူ က ဖျောပွပေးပါ တယျ။ ယခုမှာဆိုရငျလညျး ပနျးအိဖွူက သူမ သားလေးနဲ့အတူ ခဈြစရာပုံလေးတှကေို ဖျောပွ လာ ခဲ့ ပါတယျ။
ဒါကတော့ ပနျးအိဖွူက “မမေပေနျးအိ မွတျနိုးတဲ့ ဆံပငျရှညျလေးရယျ မမေပေနျးအိ ခဈြတဲ့သား သားလေးရယျ ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးအပွငျ အပြိုဘဝကတညျးက ထိနျးသိမျးလာတဲ့ ဆံ ပငျ ရှညျ လေးကို သားသားလေး မှေးပွီးသညျ့တိုငျ အမွတျတနိုးထားရှိနဆေဲဖွဈတဲ့ သူမရဲ့ ပုံ လေး ကိုတငျ ပေးလာတာပါ။ ကဲ…ခဈြပရိသတျတှေ ကွညျ့ရှုစဖေို့အတှကျ ပွနျလညျတငျ ဆကျ ပေး လိုကျ ပါ တယျ…. ။
Source & Photo credit – Pan Ei Phyu ‘s Facebook Account
ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းတွေနဲ့ ဂီတလောကမှာ အောင်မြ င်မှုတွေရရှိနေတဲ့ တေး သံရှင်ကတော့ အဆိုတော် ပန်းအိဖြူ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယေ န့အချိန်ထိလည်း ပန်းအိဖြူ က အနုပညာအလုပ်တွေကို အနည်းငယ်မျှသာ လုပ်ကို င်နေပြီး သာယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အိမ် ထောင်ရေးကို တည်ဆော က်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမက မြန်မာဆန်ဆန် ဝတ်စုံလေးတွေ ကိုပဲ ဝတ်ဆင်တတ်ပြီး ဆံနွ ယ် ရှည်လေးတွေနဲ့ နန်းဆန်တဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ပန်းအိဖြူဟာ သာယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ေ ရးလေးကို ပိုင်ဆိုင် ထား ပြီး ချစ်စရာ သားလေးတစ်ယောက်ကို မွေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ အပြင် ပရိသတ်တွေက သူမ သားလေးကို ချစ်အားပိုအောင်လည်း သားလေးရဲ့ ပုံရိ ပ်လေးတွေကို ပန်းအိဖြူ က ဖော်ပြပေးပါ တယ်။ ယခုမှာဆိုရင်လည်း ပန်း အိဖြူက သူမ သားလေးနဲ့အတူ ချစ်စရာပုံလေးတွေကို ဖော်ပြ လာ ခဲ့ ပါတယ်။
ဒါကတော့ ပန်းအိဖြူက “မေမေပန်းအိ မြတ်နိုးတဲ့ ဆံပင်ရှည်လေးရယ် မေေ မပန်းအိ ချစ်တဲ့သား သားလေးရယ် ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးအပြင် အပျိုဘဝကတည်းက ထိ န်းသိမ်းလာတဲ့ ဆံ ပင် ရှည် လေးကို သားသားလေး မွေးပြီးသည့်တိုင် အမြ တ် တနိုးထားရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ သူမရဲ့ ပုံ လေး ကိုတင် ပေးလာတာပါ။ ကဲ…ချစ်ပရိသ တ်တွေ ကြည့်ရှုစေဖို့အတွက် ပြန်လည်တင် ဆက် ပေး လိုက် ပါ တယ်…. ။